Ovaltine Supports huge number of Myanmar People to Improve Immunity and Good Nutrition – LYCA COMMUNICATIONS
Ovaltine Supports huge number of Myanmar People to Improve Immunity and Good Nutrition
Date: May 25, 2020Author: Rahul0Comments
Yangon – May 25, 2020 – As the fight against the Covid-19 pandemic continues, Ovaltine Myanmar is rolling outanationwide campaign to improve immunity and support healthy nutrition toahuge number of people in Myanmar.
Through its mass initiative, Ovaltine supports the needy people in Myanmar, households, frontline health workers & servicemen across the country mainly to improve their health through nutrition and well-being.
“Asaleading nutritional brand in Myanmar, we are taking this nationwide initiative aimed at providing nutrition to the low-income households, frontline healthcare workers and the people who help in times of Covid-19 such as policemen and volunteers,” said Mr Ramon Sheodore Villaflor, Business Development Director Myanmar.
Under this noble initiative, Ovaltine Myanmar distributes during this period free nutritional supplement to over 320,000 people with cups of nutrition across 10 major cities in Myanmar through households, orphanages & old age homes.
According to Ovaltine Myanmar, this initiative has taken place during the COVID period primarily in the month of May and plan to continue in future at various locations in Myanmar such as Yangon, Pyay, Pathein and Mawlamyine of the lower part of Myanmar and Mandalay, Taunggyi, Lashio, Myitkyina, Monywa and Magway of upper Myanmar.
“It is very important that all people in the country be healthy during this unprecedented time of Covid-19. To be healthy, they need to be well-nourished. Therefore, we prioritize and support to those who need to improve their immunities. In the meantime, we urge people of Myanmar to stay healthy and follow rules in accordance with the official guidelines to be safe,” said Mr Ramon added.
Ovaltine contains 23 essential minerals and vitamins like Vitamin C, Zinc, etc. for daily consumption, and it helps to improve the function of the immune system.
Ovaltine originated in Switzerland in 1904 to combat malnutrition. The Ovaltine formula has improved over the years and now, drinking Ovaltine regularly helps consumers maintainahealthy diet with complete nutrition as it provides 23 essential vitamins and minerals along with macronutrients like protein. Ovaltine comes in two flavours in Myanmar – Ovaltine Malted Milk and Ovaltine Malted Choco (Power Maxx).
အိုဗာတင်းမှ မြန်မာပြည်သူအမြောက်အမြားအတွက် ကိုယ့်ခံစွမ်းအားမြှင့်တင်ရန်နှင့် ကျန်းမာသောအဟာရဖြည့်တင်းပေးရန် ကူညီပံ့ပိုး
ရန်ကုန်၊ မေလ (၂၅)ရက်၊ ၂၀၂၀ခုနှစ် – Covid-19 ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက် နေချိန်တွင် Ovaltine Myanmar သည် မြန်မာပြည်သူအမြောက်အမြားအတွက် ကိုယ့်ခံစွမ်းအားမြှင့် တင်ရန်နှင့်ကျန်းမာသောအဟာရများဖြည့်တင်းပေးရန်အတွက်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
Ovaltine Myanmar ၏ ယခုအစီအစဉ်မှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ချို့တဲ့သူများ၊ အိမ်ထောင်စုများ၊ ရှေ့တန်းမှကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို အဓိကအားဖြင့်ကိုယ်ခံအားပိုမို ကောင်းမွန်စေရန်နှင့် အဟာရပြည့်၀ကာကျန်းမာရေးတိုးတက်စေရန်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းအဟာရကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအနေနဲ့ ဝင်ငွေနည်းပါးတဲ့ အိမ်ထောင်စုတွေ၊ ရှေ့တန်းက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနဲ့ ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ရှေ့တန်းက တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့တဲ့ ရဲဝန်ထမ်းတွေ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေကို အဟာရပြည့်၀ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ နဲ့ စီစဉ်ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု Ovaltine Myanmar ၏ Business Development Director ဖြစ်သူ Mr Ramon Sheodore Villaflor ကပြောသည်။
ယခုအစီအစဉ်အရ အများအကျိုးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး Ovaltine Myanmarသည် ၂၀၂၀ခုနှစ် မေလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏အဓိကမြို့ကြီး၁၀မြို့မှအိမ်ထောင်စုများ၊ မိဘမဲ့ဂေဟာများနှင့် ဘိုးဘွားရိပ်သာများစသည်ဖြင့် လူဦးရေ ၃၂၀,၀၀၀ကျော်အတွက် အဟာရများအခမဲ့ ဖြန့်ဝေပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
Ovaltine Myanmar ၏ အဆိုအရ ယခုအစီအစဉ်အားမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းမှ ရန်ကုန်၊ ပြည်၊ ပုသိမ် နှင့်မော်လမြိုင်မြို့များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှ မန္တလေး၊ တောင်ကြီး၊ လားရှိုး၊ မြစ်ကြီးနား၊ မုံရွာနှင့် မကွေးမြို့များတွင်ပါ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရန် စီစဉ်ထားပါသည်။
“အခုလိုမကြုံစဖူးသော ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ပြည်သူပြည်သားများအားလုံး ကျန်းမာရေးကောင်းမွန် ဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ကျန်းမာဖို့အတွက်က အဟာရပြည့်၀နေဖို့တော့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့် ကိုယ်ခံအားပိုကောင်းဖို့လိုအပ်သူတွေကို ဦးစားပေးပြီး သွားရောက်ကူညီပံ့ပိုးပေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးလည်း ဒီကာလအတွင်း ကျန်းမာစွာနေထိုင်ဖို့နဲ့ လုံခြုံမှုရှိစေဖို့အတွက် တရားဝင်လမ်းညွှန်ချက်တွေကို လိုက်နာဖို့အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်” Mr Ramonက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
Ovaltine တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော သတ္တုဓာတ်၂၃မျိုးနှင့်Vitamn C, Zinc ကဲ့သို့သော ဗီတာမင် ဓာတ်အမြောက်အမြားပါဝင်သောကြောင့်Ovaltine အား နေ့စဉ်သောက်သုံးခြင်းဖြင် ကိုယ်ခံအားစနစ် ၏လုပ်ဆောင်မှုကို တိုးတက်စေပါသည်။
Ovaltineကို ၁၉၀၄ခုနှစ်တွင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကလေးသူငယ်များအာဟာရချို့တဲ့မှုတိုက်ဖျက်ရန်စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ထိုအချိန်မှစ၍ယခုအချိန်ထိတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်Ovaltineထုတ်လုပ်သည့်နည်းစနစ်များတိုးတက်လာခဲ့ပြီးOvaltineကိုနေ့စဉ်သောက်သုံးခြင်းဖြင့်သောက်သုံး သူများအတွက်ကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းပေးပြီးပရိုတင်းကဲ့သို့သော အဟာရဓာတ် များတလျှာက် ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်သော ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်၂၃မျိုးပါဝင်သောကြောင့်ပြီးပြည့်စုံသောအာဟာရကိုရရှိစေပါသည်။Ovaltineကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်Ovaltine Malted Milk နှင့် Ovaltine Malted Choco (Power Maxx)ဟူ၍အရသာနှစ်မျိုးရရှိနိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်OvaltineကိုAB Food & Beverages (Thailand) Ltd. မှ ထုတ်လုပ်ပြီး၎င်း၏အကျိုး တူစီးပွားမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများဖြစ်ကြသော DKSH (Myanmar) Ltd နှင့် Mega Life Sciences Myanmar တို့ကဖြန့်ချိပါသည်။ Ovaltine Myanmar အကြောင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုအသေးစိတ်သိရှိ လိုပါက Ovaltine Myanmar ၏ Facebook စာမျက်နှာဖြစ်သော www.facebook.com/OvaltineMM တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Covid-19CSR CampaignDKSH MyanmarLycaLyca CommunicationsLyca Company LimitedMyanmarOvaltineOvaltine MyanmarPandemicPRPress ReleasePublic RelationsTeam LycaYangon
Previous Previous post: Suzuki to ConstructaNew Automobile Plant in Myanmar
Next Next post: Suzuki (Myanmar) Motor Co., Ltd Introduces Best-selling Sedan Suzuki Ciaz Upgraded Model to Myanmar Market